Abụọ 22, 2021 | Akụkọ Site na oke osimiri na-emerụ emerụ, mmiri dị ala na-akọ ala, na-abawanye ọkwa CO2 na ikuku na ọnọdụ ihu igwe na akụrụngwa anyị, ọ bụghị ihe ijuanya na otu n'ime usoro nri atọ kacha elu maka 2021 na-ebelata mkpofu nri. Nke a bụ ihe dị oke mkpa nke kwesiri ka ewere ya ma ọ bụrụ na anyị bu n'obi idozi enweghị nchekwa nri ma belata mgbanwe ihu igwe. Dika UN Environment Programme si kwuo, ihe dika otu uzo n'ime uzo ato nke nri eweputara n'uwa dum ka mmadu rie kwa afo - ihe ruru ijeri 1.3 - ga - efue ma ọ bụ tufuo. ” Otu eziokwu gbagwojuru anya na-eburu n'uche ihe dị ka nde 800 nke erighị nri na-edozi ahụ. ndị mmadụ n'ụwa taa na nsonaazụ na-agbawa obi ...
Eprel 11, 2019 KEYWORDS mkpụrụ osisi akpọnwụ akpọnwụ / akwụkwọ nri akpọrọ / mkpụrụ oyi kpọnwụrụ / mkpụrụ osisi jụrụ oyi / mkpụrụ osisi friji na akwụkwọ nri / akwụkwọ nri friji / akwụkwọ nri friji / mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri / Global Market Insights Asia Pacific bụ nnukwu ahịa ahịa maka ifriizi-Fikiere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ahịa mkpụrụ osisi akpọnwụ akpọnwụ akpọnwụ ga-akarị ijeri $ 60 site na 2025, dị ka akụkọ nyocha ọhụụ ọhụrụ nke Global Market Insights, Shelbyville, Del si kwuo. Increbawanye ewu ewu nke nri a na-akwakọba ihe ga-abụ isi ihe na-akpata mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri akpọnwụwo. mmụba ahịa. A na-eji ngwaahịa a eme ihe n'ọtụtụ ihe oriri dị ka ofe, ihe ọ juụ juụ, nri dị njikere iri, wdg. Uru nke ngwaahịa a karịa mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ ga-abawanye ...
November 26, 2018 KEYWORDS na-ada teknụzụ / mkpụrụ oyi kpọnwụrụ / mkpụrụ osisi oyi kpọnwụrụ / mkpụrụ osisi friji na akwụkwọ nri / akwụkwọ nri friji / akwụkwọ nri a kpụkọrọ akpụkọ / iche iche n'otu n'otu-ọsọ ọsọ / ahịa oriri na elu oriri nke na-abụghị n'oge a kara aka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Ejiri ọnụahịa ngwa ngwa na-agbaze (IQF) zuru ụwa ọnụ na $ 14.77 na 2016, ma na-atụ anya iru $ 20.82 site na 2022, na CAGR nke 5.9% n'oge oge amụma, dị ka otu akụkọ nke MarketsandMarkets bipụtara, New York. Ubara ojiji nke nkpuru-osisi akpọnwụ akpọnwụ na itinye IQF na ngwaahịa nri ndị ọzọ ...